सोती घटनाका नाइके मल्ल र शर्माकाे यस्ताे छ 'कनेक्सन' - Kantipath.com
काठमाडाैं । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा भएको युवाहरुको सामुहिक हत्याका आरोपित वडाध्यक्ष डम्बर मल्लको सिधा कनेक्सन पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग रहेको पाइएको छ ।
रुकुम पश्चिमका प्रतिनिधिसभा सांसद समेत रहेका शर्माकै संरक्षणमा बसेर मल्लले सोती घटनामा जाजरकोटका ६ जना युवाहरुको नरसंहार गरेको आरोप छ ।
मंगलबारको संसद बैठकमै जनार्दनले आरोपितको बचाउ गर्नु, संसदको रेकर्डमा दलितका कारण रुकुम घटना भएको हो भन्नु, मृत्तक नवराज विक लगायतलाई कुटपिट नभई नदीमा हाम फालेर मृत्यु भएको हो भन्नु लगायतका भनाईले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । शर्माले संसद बैठकमा एकपक्षीय रुपमा घटनाको विवरण दिने प्रयास गरेका थिए । जसको कांग्रेस सांसदले विरोध गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशकै अग्रणी नेता मानिने जनार्दन शर्मा राष्ट्रिय राजनीतिका पनि प्रभावशाली नेता हुन । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र शर्मा तत्कालिन माओवादी र एमालेलाई एकता गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने नेता हुन । साथै उनले कर्णाली प्रदेश सरकार गठनमा कालिकोटका महेन्द्र शाहीलाई मुख्यमन्त्री र बुहारी बिमला पौडेललाई मन्त्री बनाउन पनि प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
कर्णालीकै एक उच्च तहको नेता बनेका जनार्दनले रुकुम घटनामा दलित समुदायका नागरिक र युवाहरुको निहत्था हत्यामा साथ मात्रै दिएनन्, लाखौ कर्णालीका दलितको आशा र भरोसालाई समेत खण्डहर पारेका छन । आखिर राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रभावशाली नेताले किन एकपक्षीय रुपमा आरोपितको बचाउ गरेर घटना तोडमोड गर्दैछन त ? केही तथ्य हेरौँ
वडाध्यक्ष मल्लको जनार्दन ‘कनेक्सन’
रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा हुन । शर्मा तत्कालिन नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले नेकपा रुकुमका प्रभावशाली नेता हुन । उनी मेयर भएसँगै चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा डम्बर मल्ल वडाध्यक्ष चुनिए ।
जाजरकोट रानागाउँका ६ जना युवाको हत्यामा प्रत्यक्ष सलंग्न भनिएका मल्ल र मेयर विशाल शर्माबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । अर्थात मेयर शर्मा र वडाध्यक्ष मल्ल काका भतिज रहेको स्थानीयको भनाई छ ।
चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा, कर्णाली प्रदेशका सांसद गोपाल शर्माका भाई हुन् । जसले घटना घटेको भोलिपल्ट आफ्नै दलका नेताहरु समेटेर छानबिन समिति गठन गरे । जसलाई निर्देशन दिएका थिए, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ।
पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, कर्णाली प्रदेशसभा सांसद गोपाल शर्मा, चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा दाजु भाई हुन । पारिवारिक सम्बन्धका कारण घटनालगत्तै मेयर शर्माले जनार्दनलाई वास्तविकता सुनाएको अनुमान छ ।
तर वास्तविकता भनेमा दोषी करार हुने डरले तथ्यलाई तोडमोड गर्न मेयर शर्माको पहलमा जनार्दनले पनि साथ दिएको देखिन्छ । मेयर शर्माकी श्रीमती र मल्लकि आमा घरकै दुई दिदी बहिनी हुन । भतिज डम्बर मल्ल वडाध्यक्ष, भाई विशाल शर्मा मेयर, दाई गोपाल शर्मा प्रदेशसभा सांसद र नाताकै ठूल्दाई जनार्दन शर्मा पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सांसद ।
यही नाताको जालोमा अल्झिएको छ, रुकुम चौरजहारीको सोती घटना । घटनामा वडाध्यक्ष मल्लका दाई भाई सबै सलंग्न छन । एमबिबिएस पढ्दै गरेका तर लकडाउनले गाउँ फर्किदा घटनामा सलंग्न भएका सन्तोष मल्ल पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका आफ्नै भाइ अनिल शर्माका सालो हुन ।
अनिल यसअघि प्रतिनिधिसभा चुनावमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ बाट उठेका थिए । कांग्रेस नेता प्रकाशमानसिंहलाई जिताउन र साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रलाई हराउन चुनाव लडेका अनिल शर्माले ३ हजार भोट बटुलेका थिए । उनले चुनावमा आफूलाई बिजुली मन्त्री अर्थात नेपालको लोडसेडिंग हटाउने तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको भाईका रुपमा चिनाएका थिए ।
जुन उनको योजनाले सफलता पायो । चुनावी नतिजाअनुसार प्रकाशनमान सिंहले जिते, रवीन्द्र मिश्रले हारे । केही सयको अन्तरले रवीन्द्र मिश्रले चुनाव हारेका थिए ।
फेरि फर्कौ रुकुम घटनातिर, सन्तोष मल्लसँगै प्रहरीले डिल्ली मल्ललाई पनि पक्राउ गरेको छ । जो वडाध्यक्ष डम्बर मल्लकै नातेदार हुन । उनी यसअघि पनि विभिन्न घटना र अपराधिक क्रियाकलापमा सलंग्न रहेको आरोप छ । फरारको सूचीमा रहेका उनी पूर्वगृहमन्त्री जनार्दनका भाई अनिलका विश्वासपात्र हुन । उनीहरुबीच विशेष नाता छ ।
केही बर्षअघि सल्यानमा भएको बस लुटपाट र हत्यामा उनको संलग्नता रहेको थियो । जिल्ला अदालत सल्यानले त्यतिबेला डिल्ली मल्लाई दोषि ठहर गरेपनि उनी राजनीतिक संरक्षणकै कारण फरार सूचीमा चढेका थिए । राजनीतिक संरक्षण भएका कारण खुलेआम हिडेका उनी अहिले जाजरकोटका युवाहरुको हत्या आरोपमा प्रहरी हिराशतमा छन ।
आफ्ना सबै भाई भारदारलाई जोगाउन जनार्दन शर्मा, गोपाल शर्मा र विशाल शर्माले रचेको घटनाक्रम हो यो । सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा गोपाल शर्माले एकलौटी पार्टीबाट छानबिन समिति बनाएर जग हसाए । जुन आफैमा विरोधाभास थियो । जसको बचाउ जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा गरे ।
नेकपा रुकुमका अध्यक्ष समेत रहेका गोपाल शर्मा र चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्मा यो घटनालाई तोडमोड गर्न हात धोएर लागेको पीडित परिवारनिकट नेताहरुको भनाई छ । घटना भएको शनिबार संसाँझै भएपनि जनार्दन शर्माकै दबाबमा पत्रकारले त्यो दिन समाचार लेख्न सकेनन् । त्यसका पछाडी जनार्दन शर्माकै हात रहेको बताइन्छ ।
यसरी जनार्दनले घटना भएको झण्डै एक हप्तासम्म परिस्थितीलई आफू अनुकुल गराउन सबै अस्त्र प्रयोग गरेका छन । उनलाई आफू ठूलो नेता हुँ, भन्ने थाहा छ, तर म निमुख गरीब र दलित समुदायको पनि नेता हुँ भन्ने कुरा उनले बिर्से जस्तो छ ।
जसकारण आफूलाई मन पराएकी युवती शुष्मा मल्ललाई बिहेका लािग भगाउन जाँदा जाजरकोट रानागाउँका नवराज विकले ज्यान मात्रै गुमाएनन् । साथीहरु गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनारको पनि अकाल ज्यान गयो । दुई जना अझै बेपत्ता छन ।
यसरी जातीय कारण देखाएर निर्दोष युवाहरुलाई मार्ने डम्बर मल्लको खुलेआम संरक्षणमा जनार्दन शर्मा उभिएका छन ।
दलित राजनीति र जनार्दनको क्रान्तिकारी खोल !
कर्णालीकै आश गरिएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सफल जनार्दन शर्मालाई धेरै दलित नेताहरुले आफ्नो आदर्श मान्छन । तर रुकुम घटनाले हजारौ दलित नेता र कार्यकर्ताको आदर्शमा जनार्दनको परिवार र नातावादले हिलो छ्यापिदिएको छ ।
उनले सोमबार बेलुकीसम्म सामाजिक सञ्जालमा घटनाको छानबिन र दोषीलाई हुनुपर्ने माग गर्दासम्म त्यो आदर्श जिवित थियो । तर मंगलबार संसद बैठकमा दलितकै कारण रुकुम घटना भएको हो भनेर एकपक्षीय विवरण दिदै तथ्य नै तोडमोड गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदले विरोध गरेका थिए ।
कांग्रेस युवा सांसद प्रकाश रसाइलीले जाजरकोटका सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र रुकुम पश्चिमका सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सोती घटनालाई दबाउन लागिरहेको संसद बैठकमै पोल खोलिदिए ।
एउटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट लिएको सुचना संसदमा गृहमन्त्र रामबहादुर थापा बादल, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र सांसद रसाइलीबाट फरक फरक गरी प्रस्तुत भएको थियो ।
जसले घटना झन रहस्यमय हुन पुग्यो । लामो समय कुटपिट गरेर, धारिलो हातहतियार प्रयोग गरेर मरणासन्न अवस्थामा भेरीमा फ्याँकेका चार जना युवाको आत्माले सबैभन्दा बढी जनार्दन शर्मालाई पिरोलेको छ । उनले १० बर्षीय द्धन्द्ध लडे । दलितका छोरालाई छातीमा गोली थाप्न लगाए ।
तर आज त्यही बन्दुकको नालबाट आएको परिवर्तनमा जनार्दन शर्मा जातीय छुवाछुतको पक्षमा उभिए । यसले जनार्दनको राष्ट्रिय राजनीतिको हाइट मात्रै घटेको छैन, अब दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र निमुखालाई न्याय दिने अवसर पनि गुमेको छ ।
नेकपाकै सुर्खेतका एक जना दलित नेताले एकसमय भनेका थिए, “जनार्दन शर्मा बाहिर हेर्दा कम्युनिष्ट नेताजस्तो लागेपनि भित्र सामन्त हुन । समय आएपछि त्यो पुष्टि हुन्छ । होइन भने रुकुमबाट उठेको उनको राजनीतिक करियरले काठमाडौँमा घर हालेर कसरी कर्णालीको गरीबी र दलित मुक्तीको राजनीिति हुन्छ ?” सायद त्यो समय आयो जस्तो छ । जनताको रगत बगाएर परिवर्तन ल्याएका नेता आफू फेरि सामन्तवादमै फर्किए ।
जनतालाई निमुखा बनाइरहन चाहे । जुन जातीय विभेदको पराकाष्ठाका रुपमा रुकुम सोतीमा भएका जाजरकोटका युवाहरुको नरसंहारले पनि पुष्टि गरेको छ । कर्णालीखबरबाट !
Previous Previous post: डिएसपीमा बढुवा भएका ६० जनाको पदस्थापन, को कहाँ ? (सुचिसहित)
Next Next post: २ दर्जन सामाजिक संस्थाको संयुक्त अपील : रुकुम पश्‍चिम ‘हत्याकाण्ड’लाई राजनीतिक संरक्षण नदिइयोस्
यस्ताे छ प्रहरीकाे बाइक पछाडी दुई युवतीलाई राखेर गुडाएको भाइरल तस्वीरकाे वास्तविकता?
ओलीका सल्लाहकार थापा भन्छन् : झुटको खेती नगरेकै राम्रो
नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौँ
प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार डा. भट्टराई अस्पताल भर्ना
एमाले बैठकमा ७० केन्द्रिय सदस्य उपस्थित : सुरेन्द्र र योगेश आएनन !
माओवादी सांसदलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्दी बनाईएको खुलासा
१५३ फर्मलाई ४५ लाख जरिवाना
नागरिकता लिने बढे
एमालेको युवा संघका केन्द्रिय सदस्य डेनी लामा उर्फ टेन्सनविरुद्ध बलात्कारको उजुरी